2021-02-27 @ 09:22 in Izaho sy ny ahy
Alasarona kely aloha. Tany Italia dia in-telo isanandro farafahakeliny no miditra "bar". Saingy ny "bar" any Italie dia tsy fisotroana toaka loatra, na dia mivarotra toaka koa aza, fa fisotroana kafé. Efa ho isaky ny 100 metatra dia misy "bar" ary tsy mahamenatra mihitsy ny mipetraka maharitra ao anatiny. Misy sakafo koa aza izy indraindray. Ny aty Frantsa indray ny "bar" toa tena fisotroana mihitsy, na dia mivarotra kafé koa aza izy indraindray.
Amin'izao fotoanan'ny COVID izao dia mihidy ny bar aty, efa ho am-bolana izao. Any anefa no toerana tena fihaonan'ny ankamaroan'ny olona. Ny mpiara-miasa rehefa avy miasa dia any no manala havizanana kely amin'ny resaka ivelan'ny asa tanteraka. Ny tanora vao mifankahalala dia any no mifanasa amin'ilay teny malaza hoe "je t'offre un verre?". Ny andian-jatovo mpinamana dia mbola any koa no "mandamina" fandaharam-potoana ho an'ny lahy sy "mifosa" ho an'ny vavy. Ireo efa zokinjokiny sy misotro ronono koa dia any no mifampiresadresaka ny "fiainana taloha" na dia tsy ronono akory aza no sotroiny any.
Fa ny tena nahatonga ahy nanoratra ity lahatsoratra ity dia ny hampahafantatra anareo ny site iray nanaitra ahy "I miss my bar" izany hoe manina ny bar-ko aho. Takelaka iray hihainoana ny feo mitranga ao anaty "bar". Mandritra izao fotoana fikatonan'y "bar" izao dia mety misy ireo te hihaino ny feo fandre anatin'ireny "bar" ireny. Ka nisy nanana hevitra nametraka anatin'io site io izany feo izany. Ho henonao ao ny feon'ny mpikarakara cocktail, ny fampidinana zava-pisotro anaty vera, ny feon'ny olona manodidina sns.
Koa raha manimanina ny "bar" ianao amin'izao fotoan-tsarotra izao dia aza misalasala mandeha ao amin'ny http://www.imissmybar.com/